FAA'IIDOOYIN BADAN ... Sirta ayaa hadda soo shaac baxday! | Martech Zone
FAA'IIDOOYIN BADAN… Sirta la kashifay Hada!
Thursday, April 23, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maya, boggeyga ma weerarin spammer. Tani weli Doug ayaa qoraya qoraalkan waxaanan ku sameynayaa rabitaankayga ikhtiyaariga ah.
Weligaa ma garaacday degel xayeysiisa inay shaaca ka qaadayaan dhammaan sirta dhibaatooyinka aad raadineyso inaad xalliso? Boggu wuxuu kubilaabmayaa qoraal aad uqurux badan oo qoraal ah, oo qaab qaate ah oo adiga ku nuugaya, sawirro geesinimo leh, markhaatiyo kalifaya… kugu soo jiidaya bogga ilaa aad si macno leh uga qaadatid kaarkaaga deynta jeebkaaga.
Markii aan ka shaqeynayay meheradda dirista tooska ah, waxaan daawaday farshaxanka Pat Coyle nuqul dheer waraaqaha lagu gaadhay heerar jawaab celin aan caadi ahayn. Waxaan aaminsanahay saaxiib iyo nuqul qoraa Erik Deckers waa taageere iyo qoraa nuqul dheer sidoo kale. Iyadoo aan loo eegin sheyga dhabta ah, kartida qorayaashan waa mid cajiib ah… waxaad ku dhowdahay in laguugu yeero dhamaadka warqadda.
Qaar ka mid ah suuqleyda, nuqul qorista noocan ahi waa wax laga naco oo, mararka qaarkood, waxay aaminsan yihiin inay khiyaano tahay. Ma dhihi karo waan ogolahay. Si fudud ayaan ku aqoonsan karaa markaan arko, laakiin mararka qaarkood way adag tahay in laga jeesto. Waxaan ka soo degsaday (oo bixiyay) dhowr buug oo ebook-kayga ah waqtigeyga - waxaana aaminsanahay inaan helay lacagteyda qiimaheeda.
Qaar badan oo ka mid ah dadkani waa suuqgeyaasha macluumaadka, gawaarida iyo ka shaqeynta ebook-yada, websaydhada iyo shirarka. Waxay ku furaan xoogaa dhadhan bilaash ah oo kugu nuugaya waxayna kugu kici karaan tobanaan kun oo doollar waqtiga aad ka baxdo shirkooda.
Qiimuhu waa qaraabo, in kastoo… haddii aad heysato kartida dallacaadda ee dadkan oo aad diyaar u tahay inaad geliso wax kasta oo aad haysato… waxaad sameyn kartaa lacag badan. Markaan daawado aqrinta boggeyga iyo boggeyga, lacag badan baan iska dhaafi karaa anigoo aan raacin raadadka Joel oo aan naftayda u noqdo suuqgeeye macluumaad.
Dadka badankood waxay la xiriiraan noqoshada Milyaneerka Internet-ka ee 'dot-com craze' dhamaadkii 1990-meeyadii… Laakiin koox yar oo Internet Pioneers ah ayaa si aamusnaan ah hantidooda uga sameysanayay internetka kahor qofna Yahoo'd ama Googled erayga "lacag ka sameynta khadka tooska ah". Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay dhiseen boqortooyooyinkoodii ilaa afar eray oo fudud laakiin aad u awood badan… HALKAN KA Dalbo
Joel Comm's New York Times Iibiyaha Ugu Fiican, Riix HALKAN si aad u dalbato, ma ahan qoraalka suuq geynta ama buug ku saabsan sida loo noqdo milyaneer. Taabadalkeed, waa muuqaal xiiso leh oo ku saabsan taariikhda ugu horreysa ee internetka iyo dadka ugu horreeya ee halkaas ka faa'iideystay - qaar iyaga ka mid ah weligaa ma maqal. Sida Mark Joyner wuxuu dhahaa, "Halkan waxaa ah koox yar oo dad ah, oo bilowgii kacaankii tikniyoolajiyadda, ay arkeen fursad oo ay qabsadeen."
Waxaa jira Suuqgeyaal Internet iyo Suuqgeyaal Internet. Waan ogahay inay isku dhawaq yihiin, laakiin badiyaa koox baa midda kale eegta sida ilmo iskuula gaar loo leeyahay oo kufanaya qof ka socda iskuulka dadweynaha. Xaaladdan oo kale, in kastoo, badiyaa waa carruurta dhigata iskuullada dadweynaha ee ku guuleysta… dhaqaajinta macaashka badan siyaabo aan dhaqan ahayn. Waxay u egtahay inay u egtahay sidii iyadoo aysan kor u kicin korna u kicin… laakiin hawlgalku waa iskaa wax u qabso waana warshad ballaaran.
Dhammaan hoos uma eego Suuqyaqaannada Internet-ka. Aynu eegno taariikhda oo, tusaale ahaan, isbarbardhig Corey Rudl (RIP) ilaa Pets.com, way cadahay cida haysatay awooda joogitaanka iyo hibada. Sidoo kale way cadahay cida khasaartay lacagtooda oo ku khasaartay dakhligooda. Aad ayaan uga baqayaa ganacsatadan hibada ay u leeyihiin kobcinta ganacsiyada cajiibka ah, isu wareejinta taraafikada midba midka kale (halkii aan ka tartami lahaa), la talin iyo isbarasho midba midka kale wixii shaqeeya iyo si aan habooneyn u istcimaala aalad kasta oo ay gacanta ku hayaan si ay u tijaabiyaan una soo saaraan nuqul badala.
Anigu ma ihi nin suuq geyn suuq geyn kara ganacsatadan, waxaan u maleynayaa adkeysigooda iyo sheekooyinkooda inay xiiso leeyihiin. Buugga Joel waa sheeko ka dib sheeko ku saabsan qaar ka mid ah kuwa ugu guuleysta suuqgeyaasha internetka. Sheekooyinka raggu habeenka oo dhan ayay soo jeedaan iyagoo xirfaddooda gacanta ku haya, seexanaya shaqada, shaqada laga eryo ka dib noqda milyaneero ayaa dhiirrigelin weyn u ah ganacsade kasta. Akhrinta sheekooyinka waxay helayaan dhiiggaaga oo garaacaya! Celcelis ahaan CMO ama Agaasimaha Suuqgeynta ayaa wax badan ka baran kara kooxdan.
Habeenkii Talaadada waan dhammeeyay Super Crunchers diyaaraddii ku sii jeeday San Francisco oo aan dhammeeyey Riix HALKAN si aad u dalbato subaxaan duulimaadka dib - dhammaan 279 bog. Waa akhris aad u wanaagsan - hubi inaad soo qaadatid markii aad fursad u hesho.
Xitaa waxaan dareemayaa ebook mustaqbalka dhow!
Tags: dib u eegista buuggariix halkan si aad u dalbatojoel comm
Falanqeyn + Hal abuur leh = Guusha Warbaahinta Bulshada
Apr 24, 2009 at 10: 33 AM
Boostada cajiibka ah, Doug! Waan u sheegi karaa buugaagtaas runtii "way kugu buuxiyeen." Arintuna waxay tahay, Waan ogahay si sax ah nooca koobiga aad tilmaamayso. Waxaan ku bartay iskuul markii aan ku soo barbaaray wakaaladda xayeysiinta tooska ah ee suuq geynta halkaasoo aan ku lahaa kaydad shaybaarro ah si aan u dhex maro, si aan u helo dhiirrigelinta MY ee xirmada boostada ee tooska ah ee soo socota, iyo buug madow oo weyn oo uu qoray nin da 'weyn kaasoo ay ahayd inuu noqdo guru mawduuca suuqgeynta tooska ah. (Waxaan ahaa ilmo waagaas, waxaan uun ka bartay halyeeyada DM ee ikhtiraacay waxyaabo sida Johnson Boxes iyo snap-paks.) Sikastaba, waxaa laygu xujeeyay inaan qoro warqad 6-bog ka kooban oo ku iibinaysa macaamiisha Warbixinta Macaamiisha (waxay ahayd "warqadda dheer" fikradda). U qor aniga waan sameeyay, laakiin macmiilku waligiis ma dirin. Wali waxaan baranayay xirfadayda markaa, waana hubaal inay caqabad ahayd.
Waxaan xasuustaa markii aan bilaabay aqrinta waraaqaha jawaabta tooska ah, anigoo aanan waligey helin waxbadan intaan ku gudajiray iskuulkeygii sare iyo kuliyadii (Waxaan ahaa qoraa qoraa xariir ku ah qoraalada dibada, asxaabta iyo ehelkaba), waxaan moodayay in waraaqaha ay u muuqdaan kuwo injiil ah.
Haa, ebook wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah! Tag!
Apr 24, 2009 at 8: 28 PM
Ebook ayaa la bilaabay!